घर सजाउँदै हुनुहुन्छ ? सावधान ! यी गल्ती नगर्नुहोस् « NagarikTimes : National News Portal From Kathmandu
घर सजाउँदै हुनुहुन्छ ? सावधान ! यी गल्ती नगर्नुहोस्
१० असार २०७७, बुधबार १४:३८
हामी घरलाई आकर्षक बनाउन चाहन्छौं तर, जानेर वा नजानेर त्यो भद्रगोल बन्न पुग्छ । घर सजाउने कुरामा हाम्रो ढंग नपुग्दा अनाकर्षक हुनपुग्छ । राम्रै बनाउन चाहेको कुरा पनि सुहाउँदिलो देखिदैन । हामी के गल्ती गर्छौ जसले घर अनाकर्षक देखिन्छ ? साथसाथै त्यसलाई कसरी सुधार गर्न सकिन्छ ?
आवश्यक्ता भन्दा बढी फोटो
शंका छैन, फोटोले घरको सोभा बढाउँछ । तर त्यही फोटो हो, जसले घरलाई बिरुप पनि बनाउँछ । कसरी ?
घरको भित्तामा फोटो सजाउनुअघि भित्ता र फोटोको आकारमा ख्याल गर्नुपर्छ । भित्ताभन्दा एकदमै सानो वा एकदमै भद्दा फोटो सुहाउँदैन । त्यसैगरी रंगविरंगी बनाउने चक्करमा जथाभावी र धेरै फोटो राख्दा पनि राम्रो देखिदैन । फोटोको प|mेम सामन्य र भित्ताको रंगसँग मिल्ने हुनुपर्छ ।
कृतिम फूलको प्रयोग
घरलाई सजाउने क्रममा हामी कृतिम फूलको प्रयोग गर्छौ, यसले घरलाई सस्तो देखाउँछ । सकेसम्म प्राकृतिक फूल वा बिरुवा सजाउनुपर्छ । जथाभावी नक्कली फूल राख्दा घर कुरुप बन्छ ।
एकैनासे रंगको प्रयोग
घरको सबै कोठामा एकै किसिमको रंगको कम्बिनेसन मिलाउने ट्रेन्ड पुरानो हो, जो अहिले बद्लिएको छ । घरको सबै कोठा, झ्याल ढोकामा एकरुपता हुनुपर्छ भन्ने छैन । सबैतिर एकै किसिमको रंग प्रयोग गर्दा घर आकर्षक देखिदैन । बरु, हरेक कोठालाई भिन्न भिन्नै रंगले सजाउनु पर्छ । यद्यपी धेरै गाढा वा चहकिलो रंगले घरको शोभा दिदैन । रंग हल्का र उज्यालो हुनुपर्छ ।
एन्टिक बस्तुको प्रदर्शन
कतिलाई आफ्नो घरमा दशकौं पुरानो फर्निचर, चिजबिज राख्न मनपर्छ । पुरानो समयमा बनेका सामग्रीहरुको प्रयोगले घरलाई आकर्षक त देखाउँछ तर, सहि ढंगले प्रयोग गर्न सकेको अवस्थामा मात्र । किनभने, त्यस्ता सामग्री धेरै भयो भने घर छरितो देखिदैन ।
प्रकाशित मिति: १० असार २०७७, बुधबार १४:३८
दाँत दुखने समस्या हामी जोकोहिलाई पनि हुन सक्छ । अहिलेको समयमा बढी हामीले गुलियो परिकार
शरिरका यी ५ स्थानमा कोठी हुने व्यक्तिे धरै भाग्यमानि हुन्छन्
कोठी भन्नेवितिकै हामीसबैलाई थाहाभएको कराहो । किन भने हरेक मानिसको एक न एक ठाउमा कोठी
थाहापाउनुहोस् ! अनुहारको कुन भागमा चाउरी पर्दा कुन रोगको खतरा ?
अहिलेको मानिसको खानपिन तथा उसको जीवनशैलिले गर्दा अहिले उमेर भन्दा बढी छिटो चाउरी परिरहेको हुन्छ
किसमिस भन्ने वितिकै हामीसबैलाई थाहाभएको कुरा हो । यो एक सुख्खा अंगर हो यसका धरै
के तपाईलाई कुलतको समस्या छ ? यो चीजको प्रयोग गर्नुहोस्
अहिलेको बदलिदो समयसँगै मानिसहरु धरै कुलतमा फस्दै गइरहेका छन् । सामान्यतया अहिलेको युवापुस्तामा मध्यपान तथा
जान्नुहोस् ! निलो बत्ती र क्यान्सरको बीचमा के सम्वन्ध छ ?
निलो बत्ती र क्यान्सरको बीचमा के सम्बन्ध छ ? स्पेनका अनुसन्धानकर्ताहरूले गरेका आश्चर्यजनक खुलासा गरेका
अंगरक्षकमा कोरोना पुष्टि भएपछि विष्णु पौडेल आइसोलेसनमा
थप ३ सय ८० जनामा कोरोना पुष्टि, कुल संक्रमित २२ हजार ९७२ पुगे
स्वास्थ्य मन्त्रालयका चार जना कर्मचारीलाई कोरोना संक्रमण